Head Material: Aluminum chiwanikwa
The Richina mutsetse rakagadzirirwa vatengi vanenge kutarisira yepamusoro zvinhu uye mukurumari. This Aluminum Snow Hwokutengesa ndiye lightweight ndokurinatsa yakawanda chando nomumwe zvichipfuura. ari aluminum Snow Hwokutengesa riri yakasimba chishandiswa rakasiyana kukosha. Muchidimbu, aluminum Snow Hwokutengesa chipande divi: 460 * 230mm, Nereza Material Aluminum, aluminum Snow Hwokutengesa kunopindirana kureba 1300mm. Kana uchida ichi Aluminum Snow Hwokutengesa kuti chakakodzera tsamba kuti tinogona aiisa navo mumwe nomumwe aine atorwa.
Aluminum Snow Hwokutengesa
Kunogara Aluminum Snow foshoro , kunopindirana urefu 1300mm
Snow foshoro aruminiyamu chipande, saizi 460 * 230mm
chando nefoshoro chete upfu zvemapuranga simbi mubato
Chipande uye tibate zvakabatana nemasikuruu
Kutsvaka akanaka Aluminum Snow Hwokutengesa Manufacturer & nokutengesa? Tine zvakawanda kusarudzwa pane mitengo zvikuru kukubatsira kuwana okusika. Vose Aluminum Snow foshoro vari unhu unovimbisa. Tiri China Origin Factory vaiva Mail Order Snow Hwokutengesa. Kana muine mubvunzo, tapota inzwa wakasununguka nesu.
18-padiki Poly Nereza Snow foshoro
Wakagadzirwa Magetsi foshoro nokuda Vehicles
Poly Snow Push nefoshoro chete Aluminum Bata
Telescopic foshoro Light Weight Portable Snow Sh ...